၁၉၉၃ မှ ~ ယခုထိ
အကောင်းဆုံး ကိုသာ ရည်မှန်းပါသည်	!
ဘယ်ဘာသာစကားမဆို ဘယ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမဆို ☎	.
၁။ အင်္ဂလိပ် -> နိုင်ငံမျိုးစုံ ၏ ဘာသာစကား
ဘာသာစကားအားလုံးဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။	.
၂။ နိုင်ငံမျိုးစုံ ၏ ဘာသာစကား -> အင်္ဂလိပ်
၃။ နိုင်ငံမျိုးစုံ ၏ ဘာသာစကား -> ကိုရီးယား
အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ စပိန်၊ ရုရှား၊ အာရေးဗျ၊ ဂျပန်၊ တရုတ် စသည်ဖြင့်၊	.
၄။ ကိုရီးယား -> နိုင်ငံမျိုးစုံ၏ ဘာသာစကား
လက်တွေ့လုပ်ကိုင်ပြနေသဖြင့် ယုံကြည်သင့်ပါသည်။ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများ နှင့် အစိုးရအေဂျင်စီများစွာက ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုကြသူများအား အကောင်းဆုံး ဘာသာပြန် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။	.
၁။ ဘာသာပြန်ရန် တောင်းဆိုခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း
စျေးနှုံး၊ အလုပ်ပြီးမည့်ရက်၊ အချက်အလက်များကို အသေးစိတ်လေ့လာပြီး ပြုလုပ်မည့် ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းစဉ် စသည်တို့ကို ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူများနှင့် ဆွေးနွေးပါသည်။
၂။ စျေးနှုံး အဆိုပြုခြင်း
ဆွေးနွေးမှုပြီးစီးပါက စျေးနှုံး အဆိုပြုချက် နှင့် အလုပ်ဖိုင်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပေးပို့ပါသည်
၃။ အလုပ် ဆက်လုပ်ရန် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူ၏ အတည်ပြုချက်ကို ရယူခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူထံမှ အီးမေးလ်ပြန်စာ သို့မဟုတ် အဝယ် စာရွက်ကို လက်ခံရယူပါသည်
အလုပ်အား အလုပ် မန်နေဂျာ/ဘာသာပြန် (များ) အဖွဲ့ သို့ ချပေးလိုက်ပြီး အချိန်ဇယားအတိုင်း ဘာသာပြန်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါသည်
၅။ စာစစ်ခြင်း နှင့် တည်းဖြတ်ခြင်း
အသုံးပြုထားသော စကားလုံးများ၊ စာသားများ၊ စာစီစာရိုက်အမှားယွင်းများ ရှိမရှိ နှင့် ဘာသာပြန်၏တိကျမှုတို့ကို မူလဖိုင်ဖြင့် ပြန်တိုက်စစ်ပါသည်
၆။ မိခင်ဘာသာစကားပြောသူမှ စာစစ်ခြင်း
သီးခြားနယ်ပယ်မှ အလုပ် မန်နေဂျာမှ စာစစ်ပြီးချိန်တွင် တောင်းဆိုခဲ့ပါက မိခင်ဘာသာစကားပြောသူမှ စာစစ်ပေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးပါမည်။
ပြီးစီးပါက ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူထံ အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါသည်
၈။ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ၏ စစ်ဆေးခြင်း
ပြီးစီးသွားသည့် ဘာသာပြန်မှုများအပေါ် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ၏စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အထင်အမြင်ကို ရယူပါသည်
၉။ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ စိတ်ကျေနပ်သွားခြင်း နှင့် အလုပ်ပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှု
ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူထံ ဆက်သွယ်ချိန်တွင် အလုပ်အပေါ်ထင်မြင်ချက်များပေးလာပါက ကေတီစီ မှ ပေးပို့ပြီးဖြစ်သည့် ဘာသာပြန်မှုများကို ထပ်မံစစ်ဆေးပြီး တည်းဖြတ်ပြီး နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို ပေးပို့ပါသည်
၁၀။ ဘောက်ချာ ထုတ်ပေးခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူထံ ဘောက်ချာကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါသည်
စျေးနှုံးအဆိုပြုချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်ရက်စွဲတွင် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူက ပေးပဲလ် သို့မဟုတ် ဝိုင်ယာဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းကို ပြုလုပ်ပါသည်
အရည်အသွေးမီ စကားပြန် ၃၀၀ အနက် တစ်ယောက်ယောက်ဖြင့် ကြိုတင်ချိန်းဆိုမှုပြုလုပ်ရန် ကြိုတင်ဆက်သွယ်ထားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။	..
အချိန်၊ နေရာ၊ ဘာသာစကား၊ အကြောင်းအရာ၊ ပရိသတ်၊ စက်ကိရိယာ နှင့် ဝန်ဆောင်မှု စျေးနှုံးများ စသည်တို့ကို တစ်ဉီးချင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်	.
၂။ စကားပြန် အလုပ် ကို လေ့လာခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူအပေါ်အခြေခံသည့် သုံးသပ်မှုမျိုးဖြင့် အလုပ်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး စကားပြန်ကို ရှာဖွေပါသည်
၃။ စျေးနှုံးအဆိုပြုချက် နှင့် စကားပြန်၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် (ဆက်သွယ်ရန် မပါသည့် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်)ကို ပေးပို့ခြင်း
စကားပြန်၏ ဆက်သွယ်ရန်မပါသည့် ကိုယ်ရေးရာဇဝင် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူအတွက် ဝန်ဆောင်မှုစျေးနှုံး နှင့် အသုံးပြုမည့် စက်ကိရိယာများ (အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်)ကို ပေးပို့ပါသည်
၄။ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ၏ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း
အဝယ်စာရွက်ကို လက်ခံရရှိပါက သို့မဟုတ် ဌာနတွင်း ပြန်လည်လေ့လာပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ၏ အတည်ပြုချက်ရပါက စကားပြန်အား အသင့်ပြင်ထားခိုင်းပါမည်
၅။ စကားပြန်ခြင်းနှင့်ပက်သက်သည့် အကိုးအကားများကို ရယူခြင်း
ပိုမိုတိကျသည့် စကားပြန်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ရန် နှင့် စကားပြန်မှ အကိုးအကားများကို ကြိုတင်လေ့လာထားပြီး စကားပြန်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူထံမှ အကိုးအကားများကို လက်ခံရယူပြီး စကားပြန်ထံပေးပို့ပါသည်။
၆။ စကားပြန်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည့် နေရာသို့ လွှတ်ပေးခြင်း
စကားပြန်သည် သတ်မှတ်နေရာသို့ ၁၀ မိနစ် စောရောက်နေမည်ဖြစ်ပြီး တာဝန်ရှိသူနှင့် စကားစမြည်ပြောဆိုပါမည်။ ထို့နောက် ဝန်ဆောင်မှု စတင်ပေးပါမည်
၇။ ဘောက်ချာ ထုတ်ပေးခြင်း - အကြွေးဝယ်ကဒ်ဖြင့်ပေးချေမည်ဆိုပါက ငွေပေးချေမှုကို အရင်ပြုလုပ်ထားရပါမည်
ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူထံ ဘောက်ချာကို ပေးပို့ပါမည်
၈။ ဝန်ဆောင်ခကို ပေးချေခြင်း
ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ် ကို ဘာသာပြန်ခြင်း / ကမ္ဘာ့ရွာဆန်အောင်လုပ်ခြင်း
ဝေါလ်ဝိုက်ဝက်ဘ်က ကမ္ဘာကြီးကို ပုံစံပြောင်းခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံများ၏ နယ်နိမိတ်များကို အားနည်းစေခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ဆက်သွယ်မှုကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ဘဝ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ မိတ်ဆွေ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ကို ဘာသာအများအပြားသို့ ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေ၏ စီးပွားရေးကို ကမ္ဘာအနှံအပြားရှိ အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များထံ မိတ်ဆက်၊ အရောင်းမြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်ရှိ စကားလုံးတိုင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူများ၏ လိုလားတောင့်တချက်များ ပြည့်ဝစေရန် ကိုရီးယား ချွန်ဟ ဘာသာပြန် ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ် ဘာသာပြန်အားလုံးကို ယင်းဘာသာစကား၏ မိခင်ဘာသာစကားပြောတစ်ယောက်ဖြင့် စာစစ်ပေးခြင်းဖြင့် ဒီဇိုင်းနှင့် စာသားများသည် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ပိုမို သဘာဝကျစေပါသည်။	.
ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ် ယူအာအယ်လ်များ၊ လိုအပ်သော ဘာသာစကား(များ)၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်တွင် ဘာသာပြန်ခြင်းအတွက် သီးခြားလိုအပ်သည့်နယ်ပယ်များ (သို့မဟုတ် ကြိုတင်ရွေးချယ်ထားသည့် ဖိုင်) နှင့် ဘာသာစကားများပါက ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းစဉ်အရ အလုပ်ပြီးမည့် ရက်စွဲများအကြောင်းကို ဆွေးနွေးကြပါသည်
၂။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ကို ခွဲခြားလေ့လာခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူကို အလေးပြုသည့် ဝက်ဘ် ခွဲခြားလေ့လာခြင်းပုံစံဖြင့် တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် အချက်အလက်များ ခွဲခြားလေ့လာမှုကို ပြုလုပ်ပါမည်
၄။ အလုပ် ဆက်လုပ်ရန် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူ၏ အတည်ပြုချက်ကို ရယူခြင်း
၅။ အသုံးအနှုံး နှင့် သင်တန်းပေးခြင်း
ဝက်ဘ်ဒေတာ ခွဲခြားလေ့လာခြင်းမှရသည့် အသုံးအနှုန်းများအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အလုပ်အတွက် သင်တန်းပေးခြင်း
၇။ အလုပ်တစ်ဝက် အမေးအဖြေများ
စကားလုံးအသုံးအနှုန်းများ မှန်ကန်မှုရှိမရှိ၊ ပူးပေါင်းပုံအမှားယွင်းများရှိမရှိ၊ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်များ၊ စာစီစာရိုက်အမှားယွင်းများရှိမရှိ စသည်တို့ကို စစ်ဆေးပါသည်
၈။ နည်းပညာ/ဘာသာစကား ဆိုင်ရာ စာစစ်ခြင်း
နည်းပညာ/ဘာသာစကား ဆိုင်ရာ စာစစ်ခြင်းကို မိခင်ဘာသာစကားပြောဆိုသူမှ ပြုလုပ်ပါသည်
၉။ တည်ဆောက်/စုပုံ/စမ်းသပ်/စာချောသပ်ခြင်း (အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်)
၁၁။ နောက်ဆုံး အမေးအဖြေများ
၁၂။ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ၏ စစ်ဆေးချက် နှင့် ထင်မြင်ချက်များ
၁၃။ နောက်ဆုံး အချောပေးပို့ခြင်း
၁၄။ စကားလုံးမှတ်ဉာဏ် ကို စုဆောင်းခြင်း နှင့် အလုပ်ကို ဆန်းစစ်ခြင်း
ယနေ့အချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာအနှံ နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ ကျော်မှ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် အစိုးရ အေဂျင်စီများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလျက်ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်အတွင်း အလုပ်စုစုပေါင်း ၅၀ ၀၀၀ ကျော်ကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကိုရီးယား ချွန်ဟ ဘာသာပြန် ကုမ္ပဏီသည် ကိုရီးယားတွင် ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် စံနှုန်းအသစ်ကို ချမှတ်ပေးနေပါသည်။	.
လိပ်စာ။ ။ အက်စ်တီအီး # ၁၀၂၄၊ ၃၃၊ ဂူဂျီဂီမြောင်း-ရို ၆-ဂီးလ်၊ ယွန်ထဲပို-ဂု၊ ဆိုးလ်၊ ကိုရီးယား သမ္မတ နိုင်ငံ (မက်ဟန်တန် အဆောက်အအုံ၊ ယူဒို-ဒုန်း) ဇစ်ကုဒ်။ ။ ၀၇၃၃၁
ဖုန်းနံပါတ်။ ။ (၈၂၂)-၇၈၆-၀၄၅၇ / အီးမေးလ်။ ။ @	: (822)-786-0457
တနင်္လာ-သောကြာ။ ။ ၀၉:၀၀ ~ ၂၀:၀၀ ဂျီအမ်တီ+၉	: 09:00 - 20:00 GMT+9
ရုံးချိန်ပြင်ပ အရေးပေါ်စုံစမ်းမှုများအတွက် ။ ။ @ သို့ အီးမေးလ် ပေးပို့နိုင်ပါသည်	: Tony Kim